AKHRISO:- Taariikhda Jilaayga caanka ah ee Cali Hiiraan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Taariikhda Jilaayga caanka ah ee Cali Hiiraan
AKHRISO:- Taariikhda Jilaayga caanka ah ee Cali Hiiraan
Hiiraan Xog, Apr 21, 2018:- Cidkasta oo waxtar u lahayd dalka iyo dadka waxa ay mudantahay in la xasuusto loona duceeyo.
Suxufiyiinta iyo fanaaniintu waxa ay ka mid yihiin dadka fariimaha mihiimka ah u gudbiya bulshada, kuwaas oo qayb weyn ku leh Wacyigalinta iyo ilaalinta dhaqankeena Suuban.
Hadaba iyada oo hal qormo lagu dhamayn karin ayaa waxaan Jeclahay in aan Wax ka Xuso Taariikhdii Abwaan, Jilaa, Suxufi , fanaan Cali Hiiraan oo intaas oo dhamba isku darsadey…Waxaana Qormadan ii Suuragaliyey Wiilkiisa Weyn Cabdirisaaq Cali Xasan (Cali Hiiraan) oo iiga Sheekeeyey Taariikhda Aabihii.
Cali Xasan (Cali Hiiraan) Waxa uu ku dhashay Magaalada Baledweyne ee Gobalka Hiiraan 1963 saddex sano Kadib Markii uu dalku Xoriyada qaatey.
Waxbarashadiisii ilaa Dugsiga dhexe waxa uu ku dhigtey Magaalada Baledweyne, Dugsigii sarena Waxa uu uga baxay Degmada Balcad ee Gobalka Sh/ dhexe.
Cali Hiiraan waxa uu Agaasime ka Soo noqdey Wakaaladii biyaha ee Xamar isaga oo Kaalin Weyn kulahaa biyo galintii Muqdisho iyo agagaarkeeda..
Xilliyadii adkaa ee uu dalku soo marey Waxa uu ka Shaqaynayey Warbaahinta gudaha qaybo badan oo kala duwan ayuu la soo hawl galey, sida sanadihii 2000-2007dii oo wixii ka danbeeyey uu ahaa jilaa dadka Soomaaliyeed u gudbiya Murti iyo Madadaalo wax ku ool ah.
wakhtigaa oo uu dalku xaalad adag ku jirey, waxa uuna xoogga saari jirey wacyigelin ku aadan Nabada , horumarka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin Colaadaha iyo Dagaalada Sokeeye. Isaga oo sameyn jirey Sheekooyin la jilo oo si cilmiyeysan dadka u fahansiin jirey Nabada iyo qiimaha ay leedahay, kuwaas oo ku salaysnaa Tusaalooyin waxtar leh oo dadku si fudud u fahmi karayeen.
Sanadihii 2009 ilaa 2010 Waxa uu noqdey Jilaagii loogu Jeclaa Soomaaliya, waxa uuna gudoomey bilad Caalami ah oo loogu aqoonsadey Jilaagii Sanadka, Sida uu ii Xaqiijiyey Wiilkiisa Cabdirisaaq Cali Xasan (Cali Hiiraan).
Cali Hiiraan Waxa uu ahaa Abwaan Sameeya Gabayada,, waxa kale oo uu Sameyn jirey Laxanka isaga oo waliba ahaa Macalin Saxaafadeed oo Dugsi ka dhiga Saxaafada.
Warbaahin badan ayuu la soo Shaqeeyey, Sida Radyo Simba, Horn Afrik, Radyo Shabeelle, Universal TV, Kalsan TV iyo kuwo kale oo badan.
Waxaa kamid ah Sheekooyinka uu Jiley ee lagu Xasuusan karo, Xaaji Lacag, Bakhiil iyo Beenlow, Digsi Digsi dhaley, Ceeb Yurub baan ka Joogaa iyo Kuwo kale oo badan..
Cali Hiiraan waxa uu geeriyoodey allaha u naxariisto ee 14/3/2014, kaas oo lagu duugey qabuuraha Barakaad ee Magaalada Muqdisho.
Cali Hiiraan Waxa uu ifka uga tagey Shan Caruur ah oo saddex Gabdho yihiin labana Wiilal.
Allaha u naxariisto ee Cali Hiiraan waxa uu ahaa Shaqsi dabeecad fiican oo bulshadu Jeceshahay Dhaqnkiisa iyo Jilidiisaba.
haddaba walaalayaal aan u Duceyno in illaahay Naxariistii jano ka Waraabiyo Qabrigana u Nuuriyo.
W,Q/ Mohamed Farah Duurgal
MAXAY SALKA KU HEYSAA DIBAD BAXYADA KA SOCDA KONFUR AFRICA